नयाँ स्मार्टफोन किन्नुभयो ? यी कुरालाई ध्यान दिनुस् « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
नयाँ स्मार्टफोन किन्नुभयो ? यी कुरालाई ध्यान दिनुस्
२४ पुष २०७३, आईतवार १२:५९
नयाँ स्मार्टफोन खरीद गरिसकेपछि त्यसलाई चलाइहाल्न हतार हुन्छ । हतार हतार सिमकार्ड हालेर स्मार्टफोन खेलाइहालिन्छ । तर स्मार्टफोनको सुरक्षाका लागि भने नयाँ स्मार्टफोन खरीद गरिसकेपछि केही काम अवश्य गर्नुपर्दछ । स्मार्टफोन किनिसकेपछि सुरुमै गर्नुपर्ने काम यी हुन्ः
डिस्प्लेको सुरक्षाः महंगो मोबाइलको पनि डिस्प्ले कमजोर नै हुन्छ र जोडसँग खस्दा वा थिचिँदा टुट्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले स्मार्टफोनको सुरक्षाका लागि डिस्प्लेमा राम्रो गुणस्तरको टेम्पर्ड ग्लास लगाउनुपर्छ । सामान्य स्क्रिन गार्डले फोनको स्किनलाई केवल स्क्रेच हुनबाट मात्र बचाउँदछ तर फोन खस्दा त्यसको डिस्प्ले टुट्नबाट जोगाउन टेम्पर्ड ग्लास नै लगाउनुपर्छ ।
एन्टी मालवेयर सफ्टवेयरः आफ्नो स्मार्टफोनको स्त्रिmनको सुरक्षाका साथै उसको डाटा पनि सुरक्षित राख्नु आवश्यक हुन्छ । नयाँ फोन किनिसकेपछि सबैभन्दा पहिले त्यसमा एन्टी भाइरस तथा डाटा सेक्योरिटी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहोस् जसबाट मोबाइलको महत्वपूर्ण डाटा तथा अन्य सफ्टवेयरबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकियोस् । अनलाइन खबरको सहयोगमा
प्रकाशित : २४ पुष २०७३, आईतवार १२:५९